Stunt Rally: yemahara rally simulator ine mupepeti ... kugadzirisa sezvaunoda | Linux Vakapindwa muropa
Stunt Rally: yemahara rally simulator ine mupepeti ...
Steam yakasimudzira mitambo yeLinux nenzira yakanyanyisa. Asi, kunze kwepuratifomu yaValve, kune dzimwe sarudzo dzakanaka zvakare. Uye ini handisi kureva zvitoro zvinokwikwidza seZvininipisa kana GOG, asi ndiri kutaura nezve nhamba huru yemitambo yevhidhiyo yakazvimirira iriko yeGNU / Linux, mimwe yacho yemahara uye yemahara (semuenzaniso: 0 aD). Muchikamu chino ndinokupa imwe foni Stunt rally.
Stunt Rally mutambo wevhidhiyo we kumhanyisa simulation, kunyanya rally. Nayo unogona kutyaira kuburikidza akati wandei nharaunda uye matreyini kuratidza kwako kutyaira hunyanzvi Iine zvakapfuma zvakasiyana-siyana zvinosvika zana nemakumi maviri nematatu emakwara akasiyana pamatanho makumi matatu nematatu uye kunyangwe kune mamwe mapuraneti
Kuoma kwematope kunobva pane akapusa kusvika kune akaomesesa. Uye zvakare, Stunt Rally ine yakanaka musimba yekutyaira zvakanyatsonaka, kusvetuka, kusunungura, kudzivirira zvipingamupinyi, nezvimwe. Ehe, iwe unogona kusarudza pakati 20 mota zvakasiyana, 1 mudhudhudhu, uye nezvimwe.
Zvese izvo hazvishamise, kunyange hazvo zvemahara zvakanaka chaizvo zvichienzaniswa nevamwe. Asi izvo zvauri kuda nezve Stunt Rally ndezvayo Track Mupepeti, inonakidza track mupepeti yaunogadzira yako wega emujaho zviitiko.
Zviripachena, zvinomhanya zvakanaka paGNU / Linux, kunyangwe iwe uchizviwanawo paWindows. Uye kana iwe uchifarira kuona yayo sosi kodhi, inowanikwa pasi GPLv3 rezinesi. Uye kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iyo Stunt Rally mutambo wevhidhiyo, unogona kuenda ku zviri pamutemo webhusaiti kubva kumugadziri. Ikoko iwe unowana zvakare yekuwedzera ruzivo.
Kana iwe uchida kuiisa pane yako distro, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti iri mune mamwe zororo, ndizvo zvazvichava nyore kuisa. Kana zviri zveUbuntu, iwe unogona zvakare kuzviwana mune yayo Software Center, kuitira kuti nekudzvanya nyore iwe unogona kuiisa graphically usingashandise koni ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Stunt Rally: yemahara rally simulator ine mupepeti ...
Linux Mint 20.1 ikozvino inogona kuyedzwa sekutanga beta
Chii chekutsiva CentOS ne. Dzimwe nzira kuva uye kwete kufunga.